Lenovo K12 iyo Lenovo K12 Pro waa laba taleefano cusub oo heer dhexe ah oo leh Android 10 | Androidsis
Sida ay xaqiijisay shirkaddu, Diseembar 10 waa taariikhda la doortay in la soo bandhigo laba taleefanno cusub oo loogu talagalay bartamaha inta aan la gaarin dhammaadka sanadka. Lenovo waxay go’aansatay inay shaaciso Lenovo K12 iyo Lenovo K12 Pro, laba aaladood oo caan ah Motorola, maaddaama K12 uu yahay Moto E7 Plus iyo K12 Pro uu yahay Moto G9 Power.
Labaduba waxay ka bilowdaan Aasiya, laakiin soosaaraha Shiinaha ayaa qorsheynaya inuu u qaado Yurub 2021, sida ku dhacday dhowr moodelkeedii hore. Waxaa loogu talagalay isticmaaleyaasha aan u baahnayn terminal qaali ah oo leh madax-bannaanida maalinta oo dhan, oo soconaya in ka badan hal maalin oo shaqeyneysa.
1 Dhamaan waxa ku saabsan Lenovo K12 iyo Lenovo K12 Pro
Dhamaan waxa ku saabsan Lenovo K12 iyo Lenovo K12 Pro
Lenovo K12 waxaa ku jira 6,5-inji IPS LCD (HD +) ah oo leh qashin biyood leh kamarad sawir leh, halka Lenovo K12 pro uu kordhayo 6,8 inji oo leh HD + qaraarka iyo kamarad isdaba-joog ah oo kor udhaafaysa 16 megapixels iyadoo god laga qodayo aagga bidix.
Marka la eego processor-ka, K12 wuxuu isku daraa Snapdragon 460 caan ah oo lagu lammaaneeyay 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah iyadoo suurtagal ay tahay in lagu ballaariyo booska. K12 Pro wuxuu ku darayaa Snapdragon 662 CPU, 4 GB oo RAM ah oo waxay kordhisaa ilaa 128GB oo keyd ah, sidoo kale iyada oo leh boos ballaadhin. Batariga ku jira K12 waa 5.000 mAh iyo qaabka Pro waa 6.000 mAh oo xamuulkiisu yahay 20W.
Lenovo K12 wuxuu leeyahay laba kamaradood oo gadaal ah, midka ugu weyni waa 48 megapixels halka kan labaadna uu yahay unug qoto dheer oo ah 2 megapixel. Lenovo K12 Pro dareeraha ugu weyn waa 64 megapixels wuxuuna ku darayaa labo kale, 2 megapixel macro iyo 2 megapixel sensor oo qoto dheer. Nidaamku waa Android 10 labada qalab.
Lenovo K12 iyo Lenovo K12 Pro waa la heli karaa laga bilaabo hadda CNY 799 (100 euro si loo beddelo) qaabka K12 iyo Pro wuxuu u socdaa CNY 999 (126 euro). Waxaa lagu heli karaa saddex midab: buluug, guduud iyo cawl lacag ah. Ma jiro taariikhda imaatinka Yurub waqtigaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Lenovo K12 iyo Lenovo K12 Pro waa laba taleefon oo dhex dhexaad ah oo cusub oo wata Android 10
Facebook waxay ku qasbanaan doontaa inay iibiso WhatsApp iyo Instagram ka dib markii laga dacweeyay keligiis Mareykanka